सुविधाजनक आयोजनाको जस लिने, कठिन आयोजना बिरासतको बाध्यता? :: Setopati
सुविधाजनक आयोजनाको जस लिने, कठिन आयोजना बिरासतको बाध्यता?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं,जेठ १४
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने आफ्ना योजनाहरुका बारेमा ४६ मिनेट बोले।
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भनिएपनि नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरी भाषण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हालसम्म गरेका काम र आगामी दिनका योजना तथा प्राथमिकता बारेमा बोल्न भ्याए। आफ्नै पार्टीका नेता तथा राजनीतिक किचलोका बारेमा पनि धेरै समय खर्चिएका ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएका प्रयास बारे पनि बोलेका थिए।
देशमा अभूतपूर्व विकास निर्माण भइरहेको बताउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा थुप्रै विकास आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरिएको र केही निर्माणको चरणमा रहेको बताए। निर्माण सम्पन्न भएपछि देशको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा कायापलट हुने उनको धारणा छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि भैरहवा विमानस्थल,काठमाडौं-तराइ द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग,पुष्पलाल राजमार्ग, हुलकी राजमार्ग,रेल तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको काम आफ्नै सरकारको प्रयासमा सम्पन्न भएको बताए।
'हामीले यस्ता थुप्रै रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं जसको परिणाम विस्तारै देखिने छ। यतिमात्र होइन विरासतमा पाएका संकटग्रस्त आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने क्रममा छौं' सम्बोधनका क्रममा उनले भने।
निर्माणको गति तीब्र भएको वा निर्माण सम्पन्न भएका भनेर जुन आयोजनाको जस आफूले लिए ती आयोजना पनि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा बिरासतमै पाएका आयोजना हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो सम्पन्न भएका आयोजना उनको सरकारका पालामै योजना बनेर अघि बढेका होइनन्। मेलम्ची आयोजनादेखि भैरहवा विमानस्थलसम्म यी सबै पहिलेदेखि नै निर्माणको क्रममा थिए।
डिजाइनमा समस्या देखिएका, स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएर कार्यान्वयनमा संकट देखिएका कयौं सयौं आयोजना भने अहिले पनि संकटग्रस्त छन्। भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका पाँच सय आयोजना अहिले पनि अन्यौलमै छन्।
केही समय अघि ओलीकै नेतृत्वमा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको ४८ औं बैठकमा त्यस्ता सयौं अलपत्र आयोजनाकै बारेमा छलफल भएको थियो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८, १७:५७:००
सुदूरपश्चिममा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा अन्योल
आन्तरिक उडानतर्फ नयाँ एक्सरे मेसिन र जनशक्ति थप्न वायुसेवा संचालकको आग्रह
नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि बेलायती राजदूतावासको सहयोग
'मनाङमा बाटो छैन, स्याउ बजारमा कसरी पुर्‍याउने ?'
पर्यटक आउने सहज व्यवस्था मिलाउनुपर्छ: होटल व्यवसायी